नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिका – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिका
२०७१ फाल्गुन ८, शुक्रबार ०२:३० गते
देश र जनताको भविष्य मुलुकको राजनीतिले लिएको दिशाले निर्धारण गर्दछ । सही बाटो लिएमा सुन्दर भविष्यको प्राप्ति र खराब बाटो लिएमा बर्बाद हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु हुन् । इतिहासमा राणा शासनलगायतका राजतन्त्रसम्मका तानाशाहले बर्बाद गरेको देश र जनता मुक्त गर्न विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिहरु भएका छन्, जसको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुले नै गरेका हुन् । दलहरुको भूमिका देश र जनतालाई मुक्त गरी परिर्वतनको मार्गमा प्रगतिशील ढंगले डो¥याउने हो । मुलुकबासीलाई न्याय, शान्ति, सुव्यवस्ता र शुशासनको प्रत्याभूति दिनु हो । यतिखेर जनताको संविधानमार्फत यी कुराहरुको ग्यारेन्टी हुन सक्दछ ।
लोकतन्त्रको आगमनसँगै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापना गरी सदियौँसम्म हनन् भएका जनसंविधान निर्माणले शान्ति कायम गर्दै देश र जनतालाई उन्नति, प्रगति, समृद्धि र विकासको आशा तथा पर्खाइमा नेपाली जनता छन् । राजनीतिक दलहरु सहअस्तित्व, सहमति र सहकार्यबाट रुपान्तरित ढंगले अगाडि बढ्लान् अनि मुलुकलाई संविधानसहित नयाँ नेपालको यात्रा गराउलान् भन्ने प्रगाढ इच्छा, आकांक्षासहितको प्रतीक्षामा भएका देशबासीहरुप्रति कुठारघात ह्ुँदैछ । दुःखको कुरा, द्वन्द्वको घाउ बिसेक नहुँदै यसको पुनरावृत्ति गराउन उद्यत देखिन्छन् दलहरु । संविधानसभामा दुई–दुईपटक पुगेर पनि संविधान नबनाउने कारक उनीहरु आफैँ हुन् । विडम्बनास्वरुप द्वन्द्वको पुनस्र्थापना गराउने मेसोमा पुगेका छन् ।
जनसंविधान निर्माणको अत्यन्त गहन ऐतिहासिक मह¤वको जिम्मेवारी र अभिभावकीय भूमिका पाएका दलहरु विवेक गुमाएर असफलताको कालो इतिहास खडा गर्दैछन् । संविधानको अन्तरवस्तुमा तथा कथित सहमति नभएको नाममा संविधानसभालाई नै रणभूमिमा नै परिणत गर्दै मात्र होइन, औचित्यहीन सावित गर्दैछन् । आपसी पूर्वाग्रह, आक्रोश, दम्भ र आवेगको टकरावले लगभग साठी वर्षसम्मको जनधैर्यतासँगैको कठोर आन्दोलन र क्रान्तिहरुको उपलब्धिस्वरुप प्राप्त हुन लागेको जनसंविधान घुमाउने खलनायक बन्दैछन्, दलहरु । अरबौँको मुलुकको ढुकुटी सर्वनाश पार्नेमात्र होइन, कहालीलाग्दो द्वन्द्वमा जाकेर ठूलो राजनीतिक दुर्घटनालाई स्वागत गर्दैछन् । मुलुकलाई महँगी, भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्याय, अत्याचार र ब्रह्मलुटले प्याकप्याक पारिएको छ । यस्तो भयावह परिस्थितिलाई समाधान गर्ने भूमिका लिनुपर्ने राजनीतिक दलहरु नै कारक बनेपछि अब मुलुक बचाउन नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी वर्गको अहम् भूमिका देखिन्छ । राजनीतिक माहोल भीरको चिचिन्डोजस्तो बनाएर संविधान निर्माणलाई भीरबाट गुल्ट्याउने दुष्प्रयास गर्दै अनौपचारिक ढंगले तानाशाही अभ्यासमा आ–आफ्नै पाराले लागेका दलहरुलाई बुद्धिजीवी वर्गको बुद्धि, विवेक र सुतर्कको हस्तक्षेप अनिवार्य भइसकेको छ । कार्लमाक्र्सले “तानाशाहहरुलाई बुद्धि मन पर्दैन, विवेक र सुतर्क पच्दैन” भनेजस्तो एकले अर्कोको कुरै नसुनी तानाशाही प्रवृत्ति किन पेल्छन् र जनता, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी वर्गको कुरा वा चाहनामा किन ध्यान दिँदैनन् दलहरु ? संक्रमणकालीन चपेटाले जकडिएको मुलुकको मर्म र वेदना किन
बुझ्दैनन् ? अब उनले दुर्घटनातर्फ मोडिँदै गरेको राजनीतिलाई तत्काल उपचार अति जरूरी भइसकेको छ । नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीहरु कुशल ड्राइभर बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग नेता र प्रशासक नभएता पनि त्यस्तो भूमिकामा बस्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो । यो वर्ग एउटा आमसाझा उत्तरदायित्व वहन गर्ने राजनीतिक तर सम्पूर्णको नेतृत्वदायी संस्था हुन पुगेको छ । यतिबेला नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले लखन थापा, कृष्णलाल अधिकारी, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमाजस्ता राजनीतिमा प्राणको आहुति दिएर इतिहास कमाएका सपूत नागरिक तथा बुद्धिजीवीहरुलाई गहन स्मरण गर्न जरूरी भइसकेको छ । बुद्धिजीवी वर्ग अब आ–आफ्नो लुते धन्दामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय आँखा उघारेर राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा उनीहरुले माक्र्सवादी र प्रजातान्त्रिकका रुपमा एकअर्काको धार हेर्ने होइन । एकापसमा वैचारिक भिन्नताको फूटमा होइन कि एकजुट भएर मुलुकको बर्बादीलाई रोक्ने प्रयत्नमा लागिहाल्नु पर्ने भइसक्यो । बुद्धिजीवी वर्ग खालि आ–आफ्नो पेसाको दैनिक कर्तव्यको कैदी हुने होइन । अब स्कुल, कलेज वा क्याम्पसको कक्षा कोठामा मात्र सीमित भएर हुँदैन । हस्पिटलमा बिमारी जाँचमा मात्र समय बिताएर हुँदैन । कार्यालय, उद्योगहरुको व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिएर
पुग्दैन । इन्जिनियरिङको डिजाइनमा मात्र र कलाकारिताको सीमामा मात्र एकोहोरिने बेला छैन । व्यापार वाणिज्यको टन्टाबाट उम्केर मुलुकप्रति ध्यान दिनैपर्ने भइसकेको छ । लेखरचना क्षेत्रको मेडिटेसन भंग गरेर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार तथा समालोचकहरु सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको नतिजातर्फ एकोहोरिन पर्ने अवस्था खड्किसकेको छ ।
अब नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीहरु आर्थिक आम्दानी, व्यक्तिगत स्वार्थ, पेसागत प्रमोसन, विभागीय सुविधामा ¥याल काढ्ने र अल्झिने अवस्था छैन । राजदूत, सचिव, निर्देशक, व्यवस्थापक, संस्थान प्रमुख, वैदेशिक भ्रमण अवसर, एनजिओ÷आइएनजिओ सञ्चालकलगायतका राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक नियुक्तिको ढुकुवा बन्ने वा अप्राप्तिका कारण ठुस्केर दलहरुका बदमासीपूर्ण क्रियाकलापप्रति उदासीन भई बुद्धिजीवीहरु पटमूर्ख सावित गर्ने हो भने इतिहासले सजाय दिनेछ । राजनीतिक दलहरुको ‘फुटाऊ र राज गर’ नीतिलाई सार्थक तुल्याउने गोटी बुद्धिजीवी अझै बनिरहने अर्थात् दलहरुको मुढे विचार बोक्ने भरिया र लिँडेढिपे व्यवहारको मूकदर्शक साक्षी बनिरहने हो भने बुद्धिजीवी वर्गको ठूलो अपराध ठहर्ने छ । अझै पनि दलहरुको उपयोगको भाँडो बुद्धिजीवी बनिरहने भूल गरे देश र जनताका लागि उनीहरु अत्याचारी ठहर्ने छन् ।
राज्यसत्ताको उत्पत्ति भएदेखि नै सचेत नागकि तथा बुद्धिजीवीको मह¤व बढेको सत्य स्मरण गर्दै यतिबेला आ–आफ्नो पेसागत दायित्व र सिमालाई राजनीतिसम्म फैलाउन जरूरी भइसकेको छ । समाजको विकास, समुन्नत तथा समृद्धि र अग्रगामी राजनीतिको बाटो पहिल्याइदिने दायित्व वहन गर्ने बुद्धिजीवी वर्गको योगदान विश्व इतिहासकै कालखण्डहरुमा उल्लेखनीय छ । विश्वमा भएका मानवतावादी, महिलावादी, जातीय, रंगभेदविरोधी, धार्मिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशविरूद्धको, साहित्यिक, कला–संस्कृति, समालोचना आदिलगायत सबै खाले मुक्ति आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलन तथा क्रान्तिमै पनि उपलब्धिपूर्ण निर्णायक योगदान बुद्धिजीवीको भएको बिर्सनु हुँदैन ।
नेपालमै पनि २००६ सालदेखि नै माक्र्सवादी र प्रजातान्त्रिक बुद्धिजीवीहरुले निरंकुश तथा सामन्ती व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । ठीक यतिबेला सुस्ताएका बुद्धिजीवी वर्गलाई मुलुकको भिडन्त उन्मुख राजनीतिक परिस्थितिले सक्रियताको निम्तो दिएको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउनुको सट्टा द्वन्द्व प्रक्रियातर्फ राजनीतिक दलको ध्रुवीकरणको गाँठो कसिएको छ । संविधानसभाको चुनाव भएर पनि यो वा त्यो विषयमा विवादको राँको बालेर सुनौलो समय अर्थहीन व्यतीत गर्दै आए दलहरु । फेरि पनि संविधान घोषणा त परै जाओस्, मस्यौदासम्म पनि घोषित समयमा तयार हुने कनै छाँट छैन । त्यो पनि नभएर मुलुकमा द्वन्द्वको आँधीबेहरी चल्ने, युद्धको पुनरावृत्ति हुने र मुलुक दुर्घटनामा पर्ने ठूलो खतरा दलहरुबाट सिर्जना हुँदैछ । साँच्चै राष्ट्रिय महासंकटको सम्भावना नजिकिँदै छ ।
यहीबेला दनदनी युद्ध बल्न लागेको समयमा बुद्धिजीवी वर्गले बारूण यन्त्रको भूमिका निभाउनु पर्ने भएको छ । मुलुकको दुर्घटना जोगाउन ब्रेक लगाउने कुशल ड्राइभरका रुपमा बुद्धिजीवी खडा हुनुपर्ने भएको छ । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ संविधान दिन छाडेर भिडन्तमा लागेका दलहरुलाई शान्त र सभ्य पार्न प्रहरीको भूमिकामा विचारको हतियार लिएर बुद्धिजीवी उभिनै पर्ने भएको छ । यतिबेला अनिकालको समयको जगेडा खाद्यान्नको भूमिकामा विचारको अनिकाल जोगाउन अति आवश्यक छ । नेपालको संविधान नै खलबल्याउने गरी बढ्दै गएको दलहरुको झगडामा बुद्धिजीवी वर्गले न्यायाधीशको भूमिका खेल्न जरूरी छ । लेखरचना, कलाकारिता, सञ्चारमाध्यम, साझा बुद्धिजीवी समाज, नागरिक समाजको माध्यम र रुपमा हस्तक्षेप गरी संविधानविरोधी नियत, अभीष्ट र क्रियाकलापविरूद्ध सत्यतथ्य, निष्पक्ष रुपमा पर्दाफास गरी मुलुक संकटबाट जोगाउन जरूरी छ । राजनीतिक दलहरुलाई संविधान निर्माणमा दबाब दिने ऐतिहासिक भूमिका निभाएर नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीको सार्थकतालाई उचाइमा उठाउन यी वर्गले पटक्कै अल्याङटल्याङ गर्न नहुने अवस्था आएको छ । आकाश थाम्ने जिम्मा भीमको भएजस्तै मुलुक थाम्ने जिम्मा उनैको काँधमा आइसकेको छ ।